Abafazi abaMnyama abahle bakhonza iNkangeleko yeHlabathi yoHlobo / ukuKhuthaza
Tkwiveki yakhe ephelileyo, emdaka kwaye emnyama lulwimi lobuhle. Nokuba ayaphuma okanye ayangena ngaphakathi, abanye babafazi abamnyama abahle bathatha ku-Instagram ukungqina ukuba ukujonga-akukho-bubuhle obugqibeleleyo ukubonisa ukuba uyakhanya ukusuka ngaphakathi ngaphandle. Jonga imbonakalo yehlobo.
Ixesha lethu le-Instagram lisikelelekile ngokwenene ukuba aba thixokazi bamnyama babonakalise ukubukeka kunye nakumazwi ka-Beyonce, 'i-melanin drip isikhumba sinzulu'.
Siphetha kule veki yobuhle yobuhle nentombazana yethu yekhava UAndreya Gibau. Ukumkanikazi wobuhle othathe uMiss New York, e-US ngaphambili kulo nyaka usibonisile rhoqo ukuba isithsaba silungile. Ngemilebe emibalabala yendalo kunye neenwele zakhe ezichetyiweyo zichetyiweyo ebusweni bakhe, ngokuqinisekileyo usibizile. Abafazi abaMnyama abahle
BBNaija's UVenita Akpofure yathatha imbonakalo yayo yendalo yaya kumfanekiso oqingqiweyo. Umaleko wakhe ompunga onesibindi omile ngemilebe yakhe ukuze imgqibelele ngelixa ilihlo lakhe elinamaphiko liqhubeka nokuphucula amehlo akhe. Ukuphathwa kwe-shimmer ngaphezulu kweqhina lakhe yayilixabiso elifanelekileyo lokuhamba nobuso. Yintoni ukungathandani?
Kule veki iphelileyo, ibiyinto yonke nasebusweni malunga nabaphembeleli befeve. Kuqala, uthandwa yi-YouTuber Nyma Tang wasinika ukuba athabathe imbonakalo yamehlo ye-fox yobuso obuqaqanjisiweyo. I-ponytail yakhe eqhotyoshelweyo yatsala itrayi yokuqaqambisa ubuso bayo obuhle. Ngelixa London URaven Navera wasikhonza liner emhlophe kwi lid yakhe ezantsi enika amehlo ayo ukubukeka kwe-ephemeral. Ngokuqinisekileyo siyathanda ukubona oothixokazi abamnyama.
Amagqabantshintshi ezinwele ukwakheka kwehlobo kujongeka.
Singakwazi nje ukuxoxa ngendlela iiponytails kunye nohlaziyo Ngaba ukubukeka kweklasi okunje ngoku, ngakumbi ngama-braids? Intshontsho lenkosi elaziwayo Karla Tobie Usinike ukhuthazo oluhlaziyiweyo oluhlaziyiweyo nge-bingo yakhe engenazintsu kunye neepini zeenwele ezimdaka. Umlingisi ophambili weNollywood, UDhiri Egbuson-Akande kunye ne-CEO yethu esiyithandayo, UBella Disu seyiseke ngakumbi nangakumbi kubulula bokucekeceke kunye nokuqaqamba okungaphaya kwenkangeleko ye-ponytail. Ndicinga ukuba siza kubona ngakumbi ukujonga kwe-ponytail ngale Ihlobo.
Inkwenkwezi yaseHollywood, Tracee uEllis Ross, ongazange oyike ukuzama ukubukeka ngobuhle, uyacofa kule veki idlulileyo yobuhle bayo Iimpuku zabantu kunye ne-SKIN! Umkhwa wokukhathalela ulusu kaTracee yinto esijonga sonke ngenxa yomona kuba ukubengezela kwakhe ngokuqinisekileyo kungaphakathi kwaye idrip, ingonaphakade.
Jonga iinwele ezibonakala kakuhle
Ubuzile, saphendula. @patternbe becstyle iimveliso kunye nezixhobo ziya kufumaneka nge-6am PT / 9am ET kuJuneteenth ku-partbe bec.com! #styleyourpattern Ifoto: @sharifhamza
Iposi elibiwe Tracee uEllis Ross (@traceeellisross) kwi Juni 15, 2020 kwi-8: 14am PDT
Qhubeka uzinkcenkceshela, uyakhula! 🌿🌹💦👑 Mua: @temmyforsure #selflovejourney #DakoreEgbusonAkande # DaughteroftheMostHIGH👑🙌🏾
Iposi elibiwe UDhiri Egbuson-Akande (@dakoreea) Qhubeka Juni 18, 2020 kwi-12: 43am PDT
✊🏽 Qhubeka okanye uhlelele ecaleni
Iposi elibiwe UAndreya Gibau (@andreiagibau) kwi Juni 14, 2020 kwi-3: 29pm PDT
Iinkcukacha kwiPosi yangaphambili #Caramel Truffle 💫❤️🤎
Iposi elibiwe UVenita Akpofure (@veezeebaybeh) kwi Juni 18, 2020 kwi-4: 42am PDT
Izamile iliso lempungutye namhlanje kwaye ... ndicinga ukuba ibenzelwe mna y'all futhi ngubani onokuthi #voguechallenge le kum?
Iposi elibiwe Nyma Tang (@nymatang) kwi Juni 15, 2020 kwi-5: 29pm PDT
JBN Portrait 2020. Ndiseyintombazana encinci ekhula eLagos, ndikhumbula ndibona isikwere esikhulu sekhonkrithi esiluhlaza sakhiwe ecaleni kwendlela, sibhalwe u'B 'emhlophe. Ezi zikwere zekhonkrithi ziye zasebenza nam kuba zazibonisa umbala wam wokuqala kunye nombala owuthandayo, oluhlaza. Ngokulula yenye yezona zinto zibonakalayo, kungekudala ndafunda ukuba ezo zikwere zibonisa umsebenzi (okanye iinzame) zenkampani yokwakha, uJulius Berger. Njengoko iminyaka ihamba, umgangatho kunye nokugqwesa kwaba ziimpawu ezinxulumene nale nkampani. Ndingamva amazwi athi "nguJB kuphela onokwenza loo nto" kunye "ukuba ufuna okungcono, yiya kwi-JB". Njengoko i-JBN ibhiyozela iminyaka engama-50 namhlanje, ndizele yimeko yokuzingca ekhonza ebhodini yale ntlangano yomqondiso.
Iposi elibiwe UBella Disu (@belladisu) kwi Juni 18, 2020 kwi-10: 09am PDT
Ngaba le yiManequin okanye uBuhle Bokwenene? I-Blackdoll #MelaninGoodness #redlipstick #bechas #melanin #blackandproud #blacklivesmatter # covid19 #lashlove #hair #makeup #africanamerican #afticanmakeup #blackskingirls #brownskingirks #bibyonceslay #bibyonce
Iposi elibiwe Bebe Omagbemi⭐ (@bibyonce) kwi Juni 21, 2020 kwi-5: 15am PDT
Ohh chileeee! Makhe ndinike zonke ii-angles kuba ubuzile! Le yewig ende egobile endiyinqumle ndayicwangcisa. Shiya 🙋🏾‍♀️ kwiikhomenti ukuba ufuna i-instatorial! Ndiyakuthembisa ukuba kulula kwaye ungayenza ngewig yakho egudileyo ye-curly. (Uyazazi ezo zixhonyiweyo ngasemva, lol ndiyazi ukuba unayo) BTW yeyiphi ipuzzle yakho? Ukukhangela ngamehlo: @maccosmetics brown pommade in my waterline: @maccosmetics chromaline pure White Lips: @maccosmetics chestnut liner @fentybe bec #glossbomb in chocolit Earrings @asos link in ibali Phezulu: @fashionunion #blackwomen #pixiehaircut #pixiecut #mampundu #ipiswuphu
Iposi elibiwe URaven Navera (@itsravennavera) kwi Juni 15, 2020 kwi-9: 35am PDT
Thanda ezi ntsuku zemvula❤️waphakama uziva usikelelekile ... kwaye ndiyathemba ... imihla emnandi ezayo! Ngaba abantu bake baqhele ukusebenzisa iilensi zogqirha? Nxibelelana ne-@cmhairbyhill ngale nkangeleko efanayo kunye ne-wig # blessgirl # ThanksyouJesus❤️
Iposi elibiwe USharon ooja Egwurube💄🎀💋 (@sharonooja) kwi Juni 17, 2020 kwi-4: 28am PDT
Ngamanye amaxesha awumenywanga, ukuze ungabizi umdla Khumbula ukuba 💎👂🏾😴. Izinwele: @ladiidread 🔥 Nxiba: @fashionnovacurve 💃🏾.
Iposi elibiwe KARLA TOBIE (@karlatobie) kwi Juni 18, 2020 kwi-5: 32pm PDT
. Abafazi abaNtsundu abahle bohlobo i-asethi ihlobo lijongeka
abafazi abahle abamnyama ubuhle bujongeka Umlingo wamantombazana amnyama izimonyo ezimnyama ulusu olumnyama ubuhle bomfazi abamnyama intombazana emnyama yolusu Okufumaneka